(၁၁) ကြိမ်မြောက် EPS-TOPIK (စိုက်ပျိုးရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း) စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် (နေ့ရက်၊ နေရာ၊ အချိန်ဇယား) ကြေညာချက် ‹ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန
(၁၁) ကြိမ်မြောက် EPS-TOPIK (စိုက်ပျိုးရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း) စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် (နေ့ရက်၊ နေရာ၊ အချိန်ဇယား) ကြေညာချက်
အမှတ်ပေးစနစ်ဖြင့် အလုပ်ခန့်ထားမှုစနစ် (Recruitment Point System) အရ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံရှိ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် လျှောက်ထားသူများအတွက် ပထမအဆင့် ကိုးရီးယားဘာသာ အရည်အချင်းစစ် (EPS-TOPIK) စာမေးပွဲ ကျင်းပမည့် စာစစ်ဌာန၊ နေ့ရက်နှင့် အချိန် ၊ သတိပြုရမည့်အချက်များ မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်….
နေရာ၊ နေ့ရက်၊ အချိန်၊ သတိပြုရမည့် အချက်များ…
စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း နှင့် နေရာ၊ အချိန် အပြည့်အစုံ သိရှိနိုင်ပါရန် ….
သတ်မှတ်ချက်နှင့် မကိုက်ညီသဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့် မရရှိသူများစာရင်းတွင် ပါဝင်သူများသည် ၂၄-၄-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ ၂၃-၅-၂၀၁၇ ရက်နေ့အတွင်း အစိုးရပြည်ပအလုပ်အကိုင် အေဂျင်စီရုံးသို့ စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြား၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူ နှင့်အတူ စာမေးပွဲလျှောက်လွှာကြေး ပြန်လည် ထုတ်ယူလျှောက်ထားနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။ .
သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္မကိုက္ညီ၍ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုခြင့္ မရရွိသူမ်ားစာရင္း.. (373)